गुगल प्रासंगिक विज्ञापन
इन्टरनेट, सामाजिक मिडिया मा वेबसाइट संवर्धन
लगभग इन्टरनेटमा सबै प्रयोगकर्ताहरूको विभिन्न साइटहरु र शब्द समावेश सेवाहरू विज्ञापन मा समय समयमा पूरा गर्न: प्रासंगिक विज्ञापन गूगल विभिन्न संयोजन मा।
ब्लगर्स र अनुभवी वेब मालिकको यी सर्तहरू राम्ररी थाह छन्, र प्रासंगिक विज्ञापन दिन्छ कि लाभ।
मात्र छ कि सामग्रीको विशिष्टताको विज्ञापन को फारम उत्तिकै राम्रो विज्ञापनदाताहरु र वेब मालिकको र साधारण इन्टरनेट प्रयोगकर्ता रूपमा मानिन्छ कि।
गुगल प्रासंगिक विज्ञापन - यो बाट लाभ जो:
को सार सामग्री शीर्षक प्रतिबिम्बित गरिएको छ। सन्दर्भ - सार वा अर्थ हो। खोज प्रश्न ब्राउजरमा प्रयोगकर्ता द्वारा को सार वा अर्थ को पहिचान को सिद्धान्त, Google रोबोट प्रयोगकर्ता चासो निर्धारण गर्छ।
प्रयोगकर्ता चासो रोबोट को तथ्याङ्क द्वारा निर्धारित छैन। अनुरोध को विश्लेषण र मूल्याङ्कन आधारमा रोबोट सबैभन्दा उपयुक्त इन्टरनेट स्रोतहरू (विज्ञापन को संख्या) प्रयोगकर्ता गर्न चासो हो कि चयन।
फलस्वरूप, रोबोट तिनीहरूलाई चयन इन्टरनेट संसाधनहरू, खोज अनुरोध को मुख्य परिणाम बाहेक थप, तर रंग र मार्क को एक नम्बर हुनेछ।
धेरै वेबसाइटहरु मा उपस्थित छ गुगल प्रासंगिक विज्ञापन, एउटै सिद्धान्त मा काम गर्छ। फरक रोबोट मा साइट र स्थान विज्ञापन, साइट complements जो अर्थ भित्र सामग्री विश्लेषण छ।
यस्तो विज्ञापन, प्रयोगकर्ता गर्न सुविधाजनक छ रूपमा उहाँले खोज इन्जिन र नयाँ खोजको लागि आवश्यकता बाइपास, विज्ञापन लिंक मा अर्को स्रोत सीधा जान सक्नुहुन्छ।
सुविधाहरु प्रयोगकर्ता प्रासंगिक विज्ञापनबाट प्राप्त गर्ने, कसैले दिन्छिन्।
वेब मास्टर र विज्ञापनदाता Google मध्यस्थकर्ताको को समारोह कार्य जो बीच बस्तियों प्रणाली आधारित Google AdSense विज्ञापन आय।
छोटो सेवा एक शुल्क लागि AdWords मा आफ्नो विज्ञापन राख्न विज्ञापनदाता। वेब मास्टर Google आफ्नो वेबसाइट वा विज्ञापन अन्य स्रोत Adsense सेवा प्रदान गर्दछ।
एक प्रयोगकर्ता विज्ञापन लिंक Google AdSense मा एक संक्रमण बनाउँछ गर्दा उत्तरार्द्ध विज्ञापनदातालाई पैसा केही मात्रामा हटाउँदछ र सेवा Google AdSense मार्फत, वेब मास्टर यसलाई क्रेडिट हुनेछ।
प्रयोगकर्ता विज्ञापन लिंक लागि संक्रमण गरेको छ भने, विज्ञापनदाता उहाँले मात्र प्रतिबद्ध AdWords प्रयोगकर्ता कार्य दिन्छिन्, केहि गुमाउनु छैन। तदनुसार, वेब मास्टर भुक्तानी गर्न आदेश palpable थियो मा, आफ्नो जीवन राम्रो प्रयोगकर्ता द्वारा भ्रमण गर्नुपर्छ।
सबै प्रक्रिया स्वचालित मोडमा चालु। एक विज्ञापनदाता AdWords मा आफ्नो विज्ञापन अभियान को दैनिक तथ्याङ्क ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। वेब मास्टर सेवा Google AdSense गर्न दैनिक तथ्याङ्क ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ।
Google विज्ञापनहरू गर्न, वेब मास्टर Google AdSense लागि हस्ताक्षर गर्नुपर्छ अप र उसलाई सामग्री पाहुना मेरो वेब स्रोत प्रस्ताव।
दर्ता प्रक्रिया एकदम सरल छ, तर नियम संग अग्रिम परामर्श गर्नुपर्छ। वेब मास्टर प्रस्तावित सेवा जीवन मा आफ्नो दायाँ Google AdSense पुष्टि गर्नुपर्छ। यो उद्देश्य लागि, विस्तृत निर्देशनहरू वेब मास्टर गर्ने प्रस्ताव गरिनेछ। स्रोत दर्ता गरेपछि यसको अनुमोदन पारित गर्नुपर्छ।
प्लेटफर्म वेब मालिकको विज्ञापन को लागि स्वीकार गर्दा, वेब मास्टर प्रचार सामाग्री पहुँच हुन्छ। सेवा विज्ञापन को एक ठूलो चयन दिन्छ Google AdSense वेब मास्टर। तपाईं तेर्सो देखि विज्ञापन को एक किसिम, एक व्यापक दायरा भित्र विज्ञापन एकाइ को प्रकार चयन गर्न सक्नुहुन्छ को ब्यानरहरू को आकार। साथै, रंग को विकल्प को संभावना विज्ञापन एकाइहरु साइट को डिजाइन अन्तर्गत। त्यहाँ तपाईं स्रोत लागि रूपमा कुशलतापूर्वक सकेसम्म आफ्नो वेब मास्टर प्रासंगिक विज्ञापन अनुकूलन गर्न अनुमति धेरै अतिरिक्त विकल्प छन्।
सेवा को लोकप्रियता को लागि एउटा कारण गूगल तपाईं लगभग नयाँ र अलिकति लोकप्रिय वेबसाइट संग प्रासंगिक विज्ञापन सेवा गुगल एडसेन्स वेब मास्टर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ छ। केही आगंतुकों एक दिन ठिक्क पारित गर्न सक्छ साइट प्राप्त गर्न पर्याप्त।
तुलना लागि, Yandex को नै सेवा को एक सदस्य बन्न, यो प्रति दिन कम्तिमा 300 पर्यटकहरू उपस्थित एक साइट आवश्यक छ।
VkMix परियोजना: समीक्षा। निःशुल्क लपेटन लाइक
एक ब्लगर हुनुहुन्छ? एक पेशेवर कसरी बन्न र आफ्नो ब्लग मा पैसा बनाउन सुरु गर्न
कसरी "को जवाफ" संग रिटायर गर्न: बयान
सबै यसको बारेमा - कसरी "संपर्क मा" मतदान गर्न धोखा!
कागजात सूची: पेटेंट को दर्ता नविकरण। विदेशी नागरिकहरु लागि काम परमिट मा प्याटेन्ट
डाउको रेखाचित्र: "मेरो परिवार"। "मेरो परिवार" शीर्षकमा बालबालिकाको चित्रकारी वर्ग
स्कर्ट - मौसम को प्रवृत्ति।
Gonorrhea - यो के हो? रोग को विवरण, लक्षण, उपचार
को संस्कार, आकर्षण, omens: घर मा काला जादू
एक सीवीसी-कोड के हो